एटीएम ह्याक काण्डः ५ चिनियाँ, ३ नेपाली र एक फ्रेन्च नागरिक समातिए
२०७६ भदौ १६ गते १९:५७
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको विशेष टोलीले एटीएम ह्याक काण्डमा चिनियाँ ह्याकरलाई सघाउने ३ जना नेपालीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ठमेलस्थित रहेका डेक्सो मनि चेञ्जर र नेपालय मनि चेञ्जरका क्रमशः बेदनाथ लामिछाने र रोशन प्रधान रहेका छन् । उनीहरुले अनाधिकृत रुपमा चार जना चिनियाँको २८ हजार ८ सय ६२ अमेरिकी डलर सटही गरिदिएका थिए । उनीहरुले सस्तोमा डलर किनेर महंगोमा सटही गर्ने गरेको ... read more...
एटीएम ह्याक काण्डः भाग्दा-भाग्दै त्रिअविबाट समातिय छैटौं ब्यक्ति
२०७६ भदौ १६ गते ११:३६
काठमाडौं । एटीएम ह्याक काण्डमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भाग्ने तयारीमा रहेका थप एक जना चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले आइतबार राति पक्राउ परेको छ । पक्राउ पर्नेमा बर्ष ३६ को सु लुसली रहेका छन् । जसले फ्रान्सको राहदानी बोक्ने गरेको प्रहरीले बरामद गरेको पासपोर्टबाट खुलेको छ । उनको साथबाट फ्रान्सेली पासपोर्ट भेटिएता पनि सक्कली वा नक्कली हो भन्ने विषयमा भने थप जाँच भइरहेको प्रहर ... read more...
काठमाडौं । सार्क चेम्बर महिला उद्यमी परिषद, नेपाल (एस्सिडब्लुइसी ) संग आबद्ध एक टोली नेपाली उत्पादनहरुको प्रबद्र्धन गर्ने उदेश्यसहित वर्माको याङ्गनतर्फ प्रस्थान गरेको छ । वर्मास्थित नेपाली राजदुताबासको निमन्त्रणामा एस्सिडब्लुइसी नेपालकी उपाध्यक्ष सरोजनि शेरचनको नेतृत्वमा १६ जना महिला उद्यमी सम्मिलित उक्त टोली वर्माको याङ्गन भ्रमणमा गएको हो । टोलीले याङ्गनको पाइनओ ओलीन शहरमा अवस्थित नेपाली दुताबासक ... read more...
काठमाडौं । शनिबार भएको नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल (सेजन) को निर्वाचनमा भीमप्रसाद गौतम अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । १२० मत प्राप्त गरेका गौतम प्रत्यासी मोदनाथ ढकाललाई १० मतले पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । कूल मत २२३ मध्ये ढकालले ११० मत प्राप्त गरेका थिए भने ३ मत भने कसैका लागि पनि नखसको बुझिएको छ । त्यसैगरी, महासचिवमा सुजन ओली, उपाध्यक्षमा सरस्वती ढकाल र सचिवमा कृष्ण रिजाल निर ... read more...
माफियाको प्रभावमा मन्त्री-सचिवः ४० लाख पर्ने सामान करोडौंमा खरिद
२०७६ भदौ १२ गते १२:३९
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पतालहरुले सधैं एउटै कम्पनीबाट उपकरण खरिद गर्ने क्रममा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा करोडौं करोडका उपकरण आपूर्तिको ठेक्का सधैं विशाल पण्डित सञ्चालक रहेको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन ट्रेड प्रालिले पाउँदै आएका छन् । पण्डितका यी दुई कम्पनीले भित्र्याउने उपकरण उत्पादक कम्पनी ... read more...
बार्गेनिङको अड्डा बन्दै शुद्धीकरण: किन राखियो ४ सय ५८ उजुरी तामेलीमा ?
२०७६ भदौ १२ गते ११:२४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइसकेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग झन् झन् पंगु हुँदै गएको छ । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । यी तीनवटै विभागलाई प्रभावकारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको बताइएको थियो । तर, यत ... read more...
सल्बलाए तस्करः ८३ केजी रक्तचन्दनसहित दुई जना समातिए
२०७६ भदौ १२ गते ११:१२
काठमाडौं । अवैध रक्तचन्दनसहित नेपाल प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ परेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका-६ रामहिटी चारघरे बस्ने ६० वर्षीय च्याबा लामा र मुगु घर भएका २० वर्षीय योन्देन ग्याम्चो तामाङ रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) र महानगरीय बृत्त बौंद्धको संयुक्त प्रयासमा ८३ केजी रक्तचन्दन र १ सय ५० ग्राम यार्सा गुम्बासहित उनीहरुलाई बुधबार साँझ पक्राउ गरेको ... read more...
'राजश्व चुहावटलाई दुरुत्साहन गर्न जेल जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ'
२०७६ भदौ १० गते १९:५८
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट र आर्थिक अपचलनमा ब्यक्ति कसुरदार ठहरिए आर्थिक दण्डसहित जेल सजाय गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल गर्न मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा त्यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,'राजश्वको चुहावट आर्थिक अपचलन राखेर गरिन्छ । राजश्व चुहावटलाई दुरुत्साहन गर ... read more...
एनसेलसँग ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने निर्णय सर्वोच्चद्धारा बदर
२०७६ भदौ ९ गते १९:५४
काठमाडौं । एनसेलले ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर बुझाउनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु क्रमशः तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहतपूर्ण इजलासले उक्त निर्णलाई बदर गरेको हो । गत वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले उक्त निर्णय गरेकोमा न्यायाधीशहरुको बृहतपूर्ण इजलासले उत्प्रेषणको आदेशबाट ... read more...
पर्सा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय वीरगञ्जले प्रतिवन्धित दुई हजार दरका २ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँसहित एक जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । वीरगञ्ज प्रहरीले भारतको बिहार वैशालीथाना लालगञ्जपोष्ट बस्ने ३६ वर्षीय मिथलेश कुमारलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले मिथलेश कुमारलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका-१६ ईनरुवास्थित शंकाराचार्य गेटबाट प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनको साथबाट प्रतिबन् ... read more...
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) अन्तर्गत कार्यालयहरुमा ठूलो मात्रामा बजेट हिनामिना भएको छ । (सीटीइभीटीका शिक्षालय र प्रदेश कार्यालयहरुले बजेट ब्यापक रुपमा दुरुपयोग गरेका हुन् । सीटीइभीटीको प्रदेश २ र वीपी पोलिटेक्नीक धनुषाको नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बंैक धनुषा शाखामा जम्मा भएको रकम दुबै तर्फ गरी ९३ लाख रकम मात्र झिकेको भनिएपनि यथार्थमा २ करोड झिकिएको सीटीइभीटी स्र ... read more...
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका-४ मा रहेको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानिय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अहिलेसम्म मुआब्जा र सेयर नपाएको भन्दै आयोजनाको कार्यालयमा ताला लगाएका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको माग पुरा नगरे आयोजनाको काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए । हाईड्रोपावर निर्माण हुनुअघि गरेको सम्झौतामा निशुल्क सेयर र स्थानियको जग्गामा पुगेको क्षतिको ... read more...
वेवारिसे ४५ किलो अवैध लागूऔषध गाँजा बरामद
२०७६ साउन २९ गते ०९:३१
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले करिब ४५ केजी अवैध लागूऔषध गाँजा वेवारिसे अवस्थामा बरामद गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१९ बिच टोलबाट ३ वटा प्लाष्टिकको बोरामा प्याक गरी राखेको उक्त परिमाण बराबरको गाँजा बरामद गरेको हो । वेवारिसे अवस्थामा शंकास्पद बस्तु रहेको भन्दै प्रहरीलाई विशेष सूचना प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानीबाट खटिएको टोली उक्त ठाउँमा पुगेको थियो । सोही क्रममा प्रहरीले मंगलबा ... read more...
सहकारीबाटै मिटरब्याजको धन्दाः पीडित सीआईवीको शरणमा
२०७६ साउन २३ गते १३:२६
काठमाडौं । विभिन्न कम्पनीको नाममा करोडौं ऋण अपचलन गरेका ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीविरुद्ध पीडितहरु एकजुट भएका छन् । ऋणी पीडितहरुलाई तह लगाउन एकपछि अर्को गर्दै दैनिक पत्रपत्रिकामा ऋण चुक्ता गर्न उर्दी जारी गरेर कारबाहीबाट जोगिन भण्डारीले नयाँ जुक्ति निकालेका छन् । तर, भण्डारीले गरेका त्यस्ता हरेक हर्कतहरु उनैका ला ... read more...
बजारमा जताततै १ हजार दरका नेपाली नक्कली नोट, होसियार !
२०७६ साउन २३ गते १०:२१
उदयपुर । १ हजार दरका ३९ वटा नक्कली नेपाली नोटसहित प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चौदण्डीगढी नगरपालिका, ५ सिवाई बस्ने मोहम्मद अनिल मिया रहेका छन् । उनले सोही ठाउँस्थित किराना पसलमा १ सय ४० रुपैयाँको सामान किनेर हजार रुपैयाँको नोट दिएका थिए । त्यसपछि पसलेसँग ८ सय ६० फिर्ता लिएका थिए । तर उनले दिएको नोट नक्कली भन्दै प्रहरीमा सूचना पुग्यो । लगत्तै ईलाका प्रहरी कार्यालय सुन्दरपुरबाट ... read more...
काठमाडौं । सुनको मुल्य लगातार बृद्धि हुँदै प्रतितोला ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च मुल्य हो । मंगलबार ६८ हजार रुपैयाँ रहेको मुल्य बुधबार फेरि ५ सय बढेर ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग बढेपछि सुनको मुल्य एक्कासी उकासिएको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यापार महासंघले सुनको मुल्य अझै बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ । ... read more...
'सरकार कामचोर ठेकेदारहरुको कठपुतली'
२०७६ साउन २२ गते १०:१९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै सरकार 'कामचोर' ठेकेदारप्रति कठोर बन्ने संकेत गरेको थियो । समयक्रम वित्दै जाँदा भने सरकार एकाएक कामचोर ठेकेदारको पक्षमा उभिन थालेको छ । मुलुकमा भएका हरेक सडक, पुललगायतका काम अलपत्र परिरहेका छन् । तर राजनीतिक पार्टी र नेताको संरक्षणमा मुलुकलाई लुट्ने ठेकेदारमाथि अहिलेसम्म कठोर कारबाही हुन सकिरहेको छैन । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोध ... read more...
स्रोत नखुलेको २१ लाख २२ हजार रुपैयाँसहित ठाकुर पक्राउ
२०७६ साउन २१ गते २०:३२
महोत्तरी । सशस्त्र प्रहरी बल, ९ नम्बर गण हेक्वा महोत्तरीबाट खटिएको एपीएफ टोलीले लाखौं स्रोत नखुलेको रकमसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा महोत्तरी गाउँपालिका-१ डामी बस्ने ३५ बर्षीय सुरेन्द्र ठाकुर रहेका छन् । उनलाई मटिहानी नगरपालिका-९ स्थित हनुमान चोकबाट पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । हनुमान चोकबाट ज ११ प १७३२ नम्बरको मोटरसाइकलमा जलेश्वरतर्फ जाँदै गरेका ठाकुरलाई सशस्त्र प्रह ... read more...
सहकारीको ठगी: झण्डै दुई करोडको ठगी मुद्दामा एक महिला पक्राउ
२०७६ साउन २१ गते १९:३२
काठमाडौं । सहकारीको नाममा दुई सय भन्दा बढीलाई ठगी गरेको आरोपमा फरार रहेकी प्रतिमाम सिटौलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-२६ की ३२ वर्षीया सिटौलालाई सोमबार नुवाकोटको विदुरबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई ठगी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको २०७३ चैत्र ७ गतेको फैसलाले १ महिना कैद र १८ लाख ३१ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर ग ... read more...